Malunga ne-EISEN-SHENZHEN EISEN INDUSTRY LIMITED
I-EISEN INDUSTRY LIMITED (KUANGYE DONGGUAN TECHNOLOGY CO., LTD) ifumaneka kwilali yaseLianhu, eTangxia Idolophu, kwisiXeko saseDongguan ngezothutho olufanelekileyo, kunye nendawo yokwakha engaphezu kweemitha zesikwere ezingama-5,000.
Okwangoku, izixhobo zoomatshini zenkampani zibandakanya: i-10 yeelayini ezizenzekelayo zendibano, ngaphezulu kwe-40 iimaski zonyango ezilahlwayo kunye ne-KN95 FFP2 yemigca yemveliso ezenzekelayo, ilabhoratri epheleleyo yombane,
kunye nokusekwa kweqela lesithathu eliqinisekisiweyo, Umgangatho wama-000 wokusebenzela ngaphandle kothuli, Ilabhoratri yezonyango ekumgangatho we-10,000, njl.njl. Ngo-Matshi 2020, inkampani
udlulisile I-ISO13485 kunye ne-GMP yezonyango Isiqinisekiso somgangatho wesixhobo, kwaye ngoMeyi 2020 yafumana iphepha-mvume lokuveliswa kwezixhobo zonyango lweklasi yesibini, kunye Imveliso ipasile ukuqinisekiswa kwekhaya nakwamanye amazwe
amaziko obugcisa. I-EISEN INDUSTRY LIMITED iqhuba ngokuqhubekayo kwezobuchwephesha kwaye yenze nzulu uhlengahlengiso lwenkqubo esemgangathweni, ibeka isiseko esiqinileyo sokufezekisa umbono wethu wequmrhu. Wonke umntu makonwabele impilo kunye nobuhle bakhe!
Ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nomgangatho weemveliso ezivela kumthombo, sikhethe ngononophelo kushishino's abathengisi bempahla ekrwada ephezulu kwintsebenzo yexesha elide kunye nesivumelwano somthengisi esisayiniweyo nesinyanisekileyo esingaphezulu kwama-20suppliers.
Sithathe inxaxheba kwimiboniso emininzi e-China, kwaye abarhwebi abavela e-China banomdla kakhulu kwiimveliso zethu.
Abathengi abaninzi baphesheya banelisekile kakhulu ziimveliso zethu. Sisebenze nzima ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo. Siza kwenza elethu igalelo ngeli xesha likhethekileyo. Nceda uqiniseke ukuba ukhetha thina, siya kukubonelela ngesisombululo esifanelekileyo.
Umzi mveliso wethu wonke wamkela iworkshop engenothuli, emva kwethu isebe lokhuseleko lesizwe lokujonga, nokuba ngoomatshini, izixhobo okanye abasebenzi yonke imihla benza umsebenzi olungileyo, ukubulala iintsholongwane kwaye bahlala bethe cwaka, kuba zonke iinkcukacha zemithombo yolwazi, thina ukusetyenziswa ngokungqongqo kokukhuselwa, yenza umsebenzi olungileyo kuyo yonke ikhonkco lokumisa, ugxininisa kwiimveliso nakubo bonke abasebenzi abakhusela impilo.
Inkampani ijongana nazo zonke iinkcukacha zomsebenzi ngesimo sengqondo nombulelo. Okwangoku, imveliso yokuqala ihlala inenkxalabo yethu malunga nobhubhane kunye nemithandazo yesisombululo kwangoko.
Uhlobo lweShishini ------ Umenzi
Ilizwe / Ummandla --- Guangdong, China
Iimveliso eziphambili --- Ukulahlwa kobuso bezoNyango (okungasekhoyo), Ubuso obulahlwayo beMaski, i-KN95 iMaski yoLuntu, imaski yobuso ye-FFP2, iMaski yoKhuselo lwezoNyango, i-Thermometer ye-infrared ye-infrared
Ubunini ------ Umnini wabucala
Abasebenzi xa bebonke --- 101-200 yaBantu
Ingeniso yonyaka iyonke --- iyimfihlo
Unyaka oMiselweyo- 2019
Iziqinisekiso (1) --- ISO13485
Iimakethi eziPhambili --- iAfrika 35.00%
ENtshona Yurophu 25.00%
Intshona Melika 22.00%
Ubungakanani beFektri 3,000-5,000 yeemitha zesikwere
Umzi-mveliso / uMmandla Igumbi 501 Ukwakha 1, No.1 Dong Yuan Wu Lu Rod, Lianhu, Tengxie TownDngguan Cry, Guangdong ProinceChine
Imveliso yeeLines Ngaphezulu kwe-10
Umsebenzi wekhontrakthi Iinkonzo ze-OEM ezinikezelweyo
Ixabiso leMveliso loNyaka Ngaphezulu kwe-USS100 Mllion
Imveliso yaminyaka le
Igama lemveliso ImvelisoLineCepecity OkwenziweyoIiyunithiZivelisiwe (unyaka odlulileyo) Iqinisekisiwe
Ukulahleka kweMedicalFaceMask (ayiyiyo-
Aseptic) Iiyunithi ezingama-2000000 / iNyanga Iiyunithi ze-20000000 √
UkulahlwaFaceMask Iiyunithi ezingama-2000000 / iNyanga Iiyunithi ze-10000000 √
I-KN95PublicMask Iiyunithi ezingama-500000 / iNyanga Iiyunithi ezingama-3000000 √
Inkqubo yoKhuseleko kwezeMpilo Iiyunithi ezingama-500000 / iNyanga Iiyunithi ezingama-3000000 √
Iinkcukacha zonxibelelwano ezingezizo Iiyunithi ezili-100000 / iNyanga Iiyunithi ze-1000000 √